नगदको उन्मूलन र जनताको सम्पूर्ण नियन्त्रणको लागि आदर्श अलबाय अपराध: मार्टिन भिजल्याण्ड
क्रयासहरू, औषधिको पैसा, फेरारिस र लेम्बोर्गिनेसिसहरू, मोटरसाइकल समूहहरू "स्वतन्त्र मिडिया" मा आक्रमण गर्छन् र एकअर्कालाई मार्छन्। नीदरल्याण्ड एक जंगली पश्चिम देश हो! यो वास्तवमा खतरनाक छ, किनकि ती सबै फर्काइएको जिदवादीहरू र सम्भावित आईएस आतंककारीहरूको अलावा, एटीएम नियमित रूपमा हवामा उडान गर्दैछन् र बैंकिङहरू सबै पैसा लन्डन गर्ने प्रचलनहरूसँग संघर्ष गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। वास्तवमा, डच राज्यले पूर्णतया आफ्नो गुणा गुमाएको छ र यसैले हामीलाई बैंकको लागि थप अधिकृत शक्तिहरू चाहिन्छ, धेरै मानिसहरु लाई सेवामा पछाडि राख्नु पर्छ र त्यस पछि हामीले ट्युलिप्स, प्वाइन्ट्स र फ्री नरम ड्रग्सको क्षेत्रमा खुशीसाथ जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। ती सुन्दर कफी पसलहरूमा खपत।
तपाईं तिनीहरूलाई चालहरू थाहा छ। टायर आपूर्तिकर्ता जसले पहुँच सडकहरूमा नाखूनहरू मेटाउँछ; गिलास व्यापार जसले पूर्व पूर्वी ब्लक देशबाट केही केटाहरूलाई टाढा खिचेर ट्याप गर्न मद्दत गर्दछ; सुरक्षा क्यामेरा सप्लायर जसले केही चोरीहरू व्यवस्थित गर्छ। तपाई तिनीहरूलाई थाहा छैन? राम्रो देखिन्छ, तब तपाईंले अखबार र टिभि धेरै देख्नु भएको छ र तपाईंले सुनेको सबै कुरामा विश्वास गर्नुहुनेछ र हेर्नुहोस्। तपाईं अपराध आफैलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईंले समस्या सिर्जना गर्नुहुनेछ र मान्छेमा डर र पछि समाधान आउनु र यदि तपाईं मीडियामा धेरै धेरै महंगी खेलकुद कारहरू देखाउँनुहुन्छ र अपराधीहरूको कथाहरू मोटी विलाहरू र पाहुनाहरू बोलाउनुहुन्छ, तपाईले समान मानिसहरूलाई रिस उठाउनुहुन्छ र रिस उठाउनुहुन्छ, त्यसैले तपाईंले उपायहरूका लागि उत्तम प्रजनन ग्राउण्ड सिर्जना गर्नुभयो जुन अन्ततः सबैलाई असर गर्दछ।
निस्सन्देह तपाईं सबै कि आपराधिक पैसा पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ, किनकी तपाइँ त्यस सानो रोटीको लागि कडा मेहनत गर्नुहुन्छ र ओभरडोजलाई खुसी र शान राख्न खेलौं। त्यसैले तपाईं मनपर्दैन कि अपराधीहरूलाई ती सजिलै ती ठूला कारहरू र लक्जरी जीवनसँग टाढा टाढा जान्छन्। त्यो व्यापार सम्झनुहोस्! र त्यो रकम यसका लागि रद्द गरिएको हुनुपर्छ वा कि प्रत्येक लेनदेन बैंक र सरकारलाई पारदर्शी हुनुपर्छ। राम्रो! यो गर आखिर, तपाइँसँग लुकाउन केही छैन। यसैले हामी नगद समाज (नगदहीन समाज) मा जान्छौं जसमा तपाईले गर्नुहुने सबै कुरा स्पष्ट छ।
ब्लकचाई र अधिमानतः बिटकोइन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राले समाधान प्रस्ताव गर्नेछ! यदि हामी सँग मिल्दछ कि 5G सञ्जाल र 'इन्टरनेटको इन्टरनेट', त्यसपछि हरेक कुकी, स्टेकको प्रत्येक टुक्रा र तपाइँले खरीद गरेको सबै मोबाईल ट्रेसयोग्य हुनेछ; स्मार्ट शौचालय जान्दछ कि तपाईं कतिपय पाक र मोजा र राज्यलाई तपाईले भोग्नु भएको कुरा जान्नुहुन्छ; के बाहिर र बाहिर जान्छ। यो सजिलो छ, किनकि तपाईंको बीमा प्रीमियम बढ्न सक्छ यदि तपाईं गुप्त रूपमा मासोसोटो आनुवांशिक हेरफेर र धैर्य गरीएको अवस्थामा घुमाउने अवस्थामा धुम्रपान गर्नुहुन्छ र तपाईंको फेफडालाई प्रदुषण गर्नुहोस् वा यदि तपाईंको लिभर बढ्छ भने तपाईंले प्रतिदिन 1 बोटको शिरमा खानुपर्छ। मानिसहरूको कुल नियन्त्रण, यसको खपत, खर्च र खरिदका ढाँचाहरू एकतावादी शासनको लागि आदर्श स्थान हो। सौभाग्यवश हामी यो लोकतान्त्रिक कललाई जारी राख्छौं र हामी विश्वास गर्न जारी राख्छौं कि यो हाम्रो लागि राम्रो छ। त्यहाँ मान्छेहरूको कुल नियन्त्रणको साथ केही गलत छैन। आखिर, त्यो चीनमा धेरै राम्रो छ!
र यदि त्यहाँ धेरै नियमहरू र नियमहरू छन् जुन तपाइँले कुनैपनि सानो आन्दोलनमा कानूनको उल्लङ्घन गर्नेछ, राज्यले राम्रो तरिकाले सुनिश्चित गर्न सक्दछ कि तपाई अब कुनै पनि किन्न सक्नुहुन्न। ओह ठीक छ, तपाईंले यस पुस्तकमा यसको बारेमा सुन्नु पर्छ। त्यो जर्ज ओभरवेलको उदाहरणको लागि (1984) वा कि बाइबलमा (जनावर प्रणाली)। तथापि, हामी रोमांटिक र आशावादी रहन चाहानुहुन्छ। हाम्रो साथ सबै कुरा सँधै ठीक हुनेछ, किनकि हामी नेदरल्याण्ड हौं! सुन्तला, तपाईंलाई थाहा छ! मैक्स वर्स्टपेनको भूमि, उत्कृष्ट फुटबल, सबैभन्दा उत्कृष्ट डीजे, सर्वश्रेष्ठ उत्सव, क्लब र समुद्र तट सलाखहरू। देशले अर्को यूपी राष्ट्रपतिको उद्धार गर्न सक्छ! हामी माथि छौँ! त्यसोभए यदि यो हाम्रो साथ पहिले नै थोडा स्ट्राइटर हो, त्यो ठीक छ। आउनुहोस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आशावादलाई उदाहरणको रूपमा लिनुहोस् र मुस्कुराउनुहोस्! यो ठीक हुनेछ; यद्यपि यदि यो केहि डरलाग्दो देखिन्छ! विश्वास राख्नुहोस् र यो सबैसँग तपाईं गरौं।
अनि यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि क्रूसमा तपाईंको निम्ति प्रभु येशू मर्नुभयो, सबै कुरा वैसे पनि ठीक हुनेछ; तपाईंले सबै गर्नु पर्छ पछाडि बस्नुहोस् र सँगी प्यासिफिस्टहरू संग सामाजिक बनाउनु हो जुन प्रभुको साथ बस्न अनुमति दिइनेछ। नरोध्नुहोस्, केहि नगर्नुहोस्: केवल विश्वास गर्नुहोस्। पाठ्यक्रम संग्रह संग्रह भर्नुहोस्।
स्रोत लिङ्क प्रविष्टिहरू: telegraaf.nl
बोल्ड भविष्यवाणी: नकद उन्मूलनको लागि गलत झण्डा वृद्धि
Grapperhaus को "स्वतन्त्र प्रेस" inviolability को वादा गर्दछ
ट्याग: उन्मूलन, नगद, नगद, विशेष, फेरारी, geld, लिइयो, Grapperhaus, पर्दा, लेम्बोर्गिनी, minister, खुल्ला, समाज
1 जुलाई 2019 मा 13: 12
श्री Vrijland, मलाई लाग्छ तपाईंको अन्तिम टिप्पणी धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले तपाईंलाई परेशान गर्दैन। यो एक दया छ कि तपाईं येशू ख्रीष्टमा धेरै विश्वासीहरूको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छैन, जो पवित्र आत्माको माध्यमबाट स्वर्गीय स्थानहरूमा ठूलो युद्ध लडेर तिनीहरूको जीवनलाई प्रेम गर्दैन। न्याय नगर्नुहोस्।
वैसे, म झूटो बेवास्ता गर्नु भएको बलिदानको लागि तपाईंको काम र सम्मानको कदर गर्दछु।
1 जुलाई 2019 मा 13: 35
के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि लडाइँ? किन हामीले अहिलेसम्म स्वर्गीय क्षेत्रमा युद्ध गर्नु पर्छ जब सबै चीज पहिले नै समाप्त भएको छ र एजेन्डा पहिले नै तय गरिएको छ (भविष्यवाणी अनुसार)? वा अझै सम्म कुनै निश्चित कुरा छैन?
मलाई लाग्छ कि धर्मले मानिसलाई निष्क्रिय दास मोडमा राख्छ जहाँ पादरीहरू शाही परिवार र नकली लोकतान्त्रिक ("परमेश्वरद्वारा नियुक्त") को रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ)।
धर्म प्रदान गर्दछ, राजनीति को अतिरिक्त, लुसिफेरियन स्क्रिप्ट को बारे मा ल्याउन को लागि प्लस र माइनस ध्रुवीकरण को आवश्यकता हो।
1 जुलाई 2019 मा 13: 44
1 जुलाई 2019 मा 14: 34
म तपाईंबाट प्रमाण प्राप्त गर्न चाहन्छु कि "ख्रीष्ट" अस्तित्वमा छ। किनभने त्यहाँ छैन! 'क्रिस्ट' प्लेसबोको रूपमा वा राम्रो लाग्यो मलाई मेरो लागि पर्याप्त छैन। बस यसमा तल्लीन र मानिसहरू को हुन् जसले कसलाई 'ख्रीष्ट' बनाउँछ। खैर, त्यो अब हुनेछ। 10 पटक अनुमान छ।
1 जुलाई 2019 मा 20: 59
अहिल्यै दायाँ, यो 100% डिजिटल पैसा प्रणाली तिर धेरै कडा जाँदैछ।
जब हामी सिटरक्लास पार्टीका विरोधीहरूको प्रतिक्रियामा कस्तो प्रतिक्रिया पाउँछौं, त्यो पर्याप्त भन्छ। कुनै अनुसन्धान गरिरहेको छैन। मूलतः सिटरक्लास वा सांता / शैतानको उत्पत्ति बाबुलमा भएको थियो र कालो सहायकहरू त्यस राक्षसहरू हुन् जसले चिम्नीहरू घुमाउँछन्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई बलिदान दिनुहुन्छ भने, तिनीहरूले आशा राख्नेछन् भने बाइबलमा तपाईंको ढोकाको पोष्टमा रगत खानुपर्छ।
तपाईं आफ्ना छोराछोरीलाई बचपनबाट झूटो विश्वास गर्न दिनुहोस्, उनीहरूले मीठो नहुने इनाम छैन कि उनीहरूलाई डराउँछन्। तिनीहरू तनाव र पागल पागलपनको कारण मीठो हुँदैनन्!
हामी परम्पराहरुको सम्मान गर्नु पर्छ किनकी यो धेरै आरामदायक छ!
तपाईं पनि विच्छेद मितिहरू बाहिर बाहिर पार्टीहरू संगठित गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो छुट्टिहरू विलम्बित छन् र आक्रमित लुलोको द्वारा आयोजित गरिन्छ जुन तिनीहरूका प्यान्टमा हँसिन्छ किनभने हामी अन्धाको पछि लाग्दछौं।
यदि कसैले यसको बारे केही कुरा भन्छ भने, उनले मानसिक रूपमा वातावरणलाई बर्बाद गर्यो।
म आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बताउँछु किनभने तिनीहरू सान्टा क्लॉज एक विचलित मूर्ख हो भनेर कुरा गर्न सक्छन् र हामी ती अजीब पक्षमा भाग लिन सक्दैनौ।
म तिनीहरूलाई पनि भन्छु कि बाकी हरेक ठाँउमा के फरक छ भन्दा फरक छ।
तपाईं आफ्नो गोठाला हुनुहुन्छ, हामी भेडाहरू होइनौं!
म म हुँ हुँ र त्यसपछि तपाईं येशू असल गोठालो जस्तो हुनुहुन्छ
2 डिसेम्बर 2019 मा 19: 52
यो भविष्यवाणी मार्टिनभ्रिजल्याण्ड, डे क्यासबाट आउँदछ!
र गुप्पी, तपाईं मेरो लागि सही हुनुहुन्छ, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न
हामीले अझ के गर्नुपर्ला? स्वाप एक दराज को लागि एक सलाद? मलाई लाग्छ कि त्यस्तो एक मात्र तरीका छ, बार्टर
बैंकले अब (पहिले नै) तपाईंको खातालाई शून्यमा सेट गर्न सक्दछ यदि तपाईं लि gender्ग तटस्थ, क्यामेरा माइक्रोफोन जताततै बोल्नुहुन्न।
« जलवायु सम्झौता: एक राम्रो जैकेट मा मान्छे चोरी
औसत डचमेनको मानसिकता मृत्यु भएको छ: कमजोर र निष्क्रिय »
कुल भ्रमण: 59.028
SalmonInClick op के IVF र खोपहरूले बाइसेक्सुअल बच्चाहरूको पुस्ताको लागि नेतृत्व गरेको छ?